Hooyo Somaliyeed oo hanti ay leedahay Xoog looga haysto Xamar (dhegayso) – Radio Daljir
Hooyo Somaliyeed oo hanti ay leedahay Xoog looga haysto Xamar (dhegayso)
Maajo 28, 2018 10:55 b 0
Hooyo Shacni Warsame oo kamid ah Qurba joogta Somaliyeed ee dalka Dibadisa kumaqna ,kana maqna dalka mudo baddan ayaa ku laabatay Muqdsho si ay gurigeeda oo kuyaala xamar Jajab usoo eegto balse nasiib darro xoog lagu haysto.
Shacni oo Waraysi gaar ah sinaysay Radio Daljir ayaa sheegtay in Muddo ku siman 4 Blood ay joogto Muqdisho balse ninka Degmadda Xamar Jajab u qaabilsan Amniga Cismaan Sheekh Maxamed Kiska Guriga gacanta ku hayaa kaas oo Shacni ay sheegtay inuu gacan saar la leeyahay Libaan Cali Yarow oo ah Guddoomiyaha maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo ku hanjabaya in Gabi ahaanba la xirayo shacni haday hadalka sii badiso,taas oo Niyad Jab ku noqotay hooyadan inay Gurigeeda hesho.
Hooyadan oo ilmaynaysa ayaa shegtay in Dowladda sheegtay in Qurba joogta dalkooda kusoo laabtan ,balse Maxay so laabtan Maalin cad ayaa hantideeda lo adeegsanayo Shar dowladeed.
Madaxda Sare ee Dowladda Sida Madaxweynaha Dowladda Somaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayeey ka codsatay in gurigeeda ay leedahay imo agoon ahna dajin lahayd loso ceeliyo,iyado codsatay in dowladda looga bahanyahay in shacabka xoog looga haysto Guryaha Dowladu ay caawiso.
Fadlan Hooyadan Hadad jeceshahay Inaad Caawiso Kala Xirir